About Us - Jiangsu Julong CNC Machine Fitaovana Co., Ltd.
Jiangsu Julong CNC Machine Fitaovana Co., Ltd.Is miorina ao "tanan'ny manety sy mamoritra milina", Nantong Hai 'ny libao manokana amin'ny famokarana ny manety milina, hiondrika milina, Rolling milina, vy manety milina (fisotroana manety milina), hydraulic milina, uncoiling leveling tsipika. Ny orinasa maromaro vokatra, voalamina tsara rafitra, avo marina tsara, mora ny miasa, ny asa mafy orina, azo antoka sy azo itokisana, be mpampiasa amin'ny Rolling vy, fiaramanidina fiara, sambo, fahaizana, instrumentation, Stainless vy vokatra sy ny orinasa hafa.
Ny orinasa dia manana hery matanjaka ara-teknika sy ny mandroso fitaovana fanodinana, ny famokarana sy ny fitaovana fitiliana tanteraka, vokatra fenitra-pirenena mampiasa famokarana. Nandritra ny taona maro, dia nataony ho manorina fitaovana milina fikarohana sy ny fampandrosoana, isan-karazany oversize vokatra dia teraka teto, ao amin 'ny orinasa lohalaharana. Hydraulic manety milina, hiondrika milina, ny fampidirana ny alemà teknolojia, famolavolana sy fanamboarana ny-roller rehetra izao milina fampidirana ny Japoney teknolojia, ny rehetra milina fampisehoana tonga ny iraisam-pirenena nandroso lenta, tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa lasa andiana CNC vokatra, ny mivarotra vokatra tsara manerana ny firenena aondrana tsara ny Azia atsinanana, Eoropa sy Etazonia sy ny Afovoany atsinanana, efa ela no nankasitraka ny raharaham-barotra ao an-toerana sy any ivelany ny fiderana.
Amin-kitsimpo isika mandray ny tari-dalana ny vahiny sy ny fahazavana ara-barotra an-trano ratsy dimy, tanteraka ny lesona fampandrosoana, indrindra izahay manome anareo ny tena vokatra avo lenta sy ny asa fanompoana. Aoka isika hanatitra tso-po niara-fandriany, mitoetra ny laza, foana ny handray "ny toetra aloha, ny mpanjifa dia misy hery," atsangano ny sary, maka ny anti-panahy endriky rahalahy mialoha, fampandrosoana iombonana. Fiaraha-miasa iray, namana mandrakizay!